Skype oharina amin'ny fotoana Face
Aprily 17, 2020 ny Facetime Guide Leave a Comment
Fifandraisana mahomby dia manana dikany maha zava-dehibe eto amin'ity izao tontolo izao. Na te-hiresaka amin'ny namana sy ny fianakaviana, na te-hatao mifandray amin'ny mpiasa ny raharaham-barotra, tonga lafatra ianao mila fitaovana izay afaka manampy anao hanatanteraka ny fepetra takiana.
Taloha, olona ampiasaina hanao mail mba hifandray ny hafa, fa ankehitriny dia aleon'ny olona manao Internet amin'ny alalan'ny lahatsary amin'ny chat sehatra. Fa ny fifandraisana mahomby, orinasa maro no nanomboka ny lahatsary telephony fampiharana izay mamela anao hametraka antso avy na aiza na aiza maneran-tany.
Amin'ireo rehetra ireo rindrambaiko ifandrimbonana, Apps roa foana nahatakatra ny sain'ny 'izao tontolo izao. Ireo roa ireo be fifampiandaniana fampiharana nekena ho Face Time sy Skype.
Mahaliana, na fampiharana (Face Time sy Skype) Natao fa iray ihany no tanjona fa ny manam-pahefana ny mpampiasa mba miasa ara-tsosialy, manao feo na lahatsary antso, manao hafatra an-tsoratra, Video antso ho vondrona ary ny maro hafa.
Azonao atao ny mampiasa ireo mora foana fampiharana amin'ny fitaovana isan-karazany ao anatin'izany ny finday avo lenta, takelaka, biraonao, am-baravarankely, Dinika fiambenana, iPods sy ny maro hafa.
Ireo lahatsary amin'ny chat fampiharana no namorona azy ho an'ny rehetra astoundingly mora mpampiasa hatao mifandray amin'ny tsirairay ao anatin'ny segondra ijerena ny faritra, lavitra na ny fotoana. Nataony azo atao ho anao ny hankafy ny fialan-tsasatra, na mifantoka amin'ny nandeha ny raharaham-barotra, amin'ny fitoerana ho mifandray amin'ny fianakavianao, mpiasa na ny mpanjifa. Samy fampiharana no tena azo entina, mpanjifa namana sy manageable.
Fa mbola, misy lafiny miavaka izay manavaka ireo fampiharana iray hafa. Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hahazo ny tsipiriany hevitra ny fifaninanana endri-javatra, anivon'ny mifanentana, fampidirana, ary ny kalitaon'ny na Skype sy Face Time. Ity lahatsoratra ity dia handefa anareo hanapa-kevitra izay rindrankajy fitoriana impeccably araka ny zavatra ilaina.
0.2 Mifanentana amin'ny Skype:
1 Endri-javatra ny Skype
1.1 Fampidirana Skype
1.2 Quality ny Skype:
1.4 Mifanentana amin'ny Face Time:
2 Endriky ny Face Time:
2.1 Fampidirana Face Time:
2.2 Quality Feature ny Face Time:
Ny iray amin'ireo tena manjaka sy nitaky ezaka lehibe indrindra lahatsary conferencing fampiharana no Skype. Ity fampiharana tamin'ny voalohany nanomboka tamin'ny 2003 ary rehefa afaka taona vitsivitsy tany 2011 Microsoft Company nividy azy. Microsoft nanao izany fifanarahana amin'ny $8.5 lavitrisa. Ny hevitra fototra ity rindrambaiko dia ny mamela ny mpampiasa hitarika voafetra lahatsary sy feo antso.
Ankoatra izany, Skype dia manolotra ny mpanjifa ihany koa ny fanompoana ny hafatra an-tsoratra amin'ny fihetseham-po sy mahavariana taratasy fametaka. Skype nifantoka foana mba hanatanteraka ny mpanjifa ny fepetra. Noho ny vokatra mahomby miompana valiny, Skype dia niaina be fandresena.
Miaraka amin'ny avo famaritana ny feo sy ny horonan-tsary antso, Skype nahasarika ny ankamaroan'ny anjara amin'ny antso iraisam-pirenena. Amin'ny mahatalanjona rehetra ireo tolotra, Skype dia nahavita soa aman-tsara ny anarany ho ao amin'ny kianja hafa fitsarana sy ny fampitam-baovao ho.
Mifanentana amin'ny Skype:
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra dia ny Skype, fampiharana ity fitaovana miasa ho an'ny maro. Ianao no manana ny tsy voafetra rehefa mampiasa lahatsary ity conferencing fampiharana. Ny tolotra sy ny asa ny Skype mampiditra fitaovana rehetra, anisan'izany ny finday, am-baravarankely, solosaina, takelaka, sy ny lalao sehatra fitaovana.
Noho ny tolotra midadasika sy mifanentana, Skype manana mpanjifa maro ny Sony, Play Station, finday avo lenta, am-baravarankely, OS X fitaovana, Android, BlackBerry, Symbian, Samsung Smart TV, sns.
Endri-javatra ny Skype
voalohany, Skype dia natao mba hanatitra peo antso safidy ny mpanjifa. Rehefa avy ambony ny tinady sy miova ny fifandraisana, izany tatỳ aoriana, nanomboka fanatitra hafatra sy ny lahatsary antso ho an'izao tontolo izao.
Tsy toy ny Face Time, Skype dia tsy natao hanolotra na ny lahatsary amin'ny aterineto ihany no antso peo. Mamela anao amin'ny telefaona an-tariby milaza olona na telefaonina isa. Io endri-javatra no tena manampy ny olona rehetra izay tonga ny aterineto dia mahantra na miadana.
Fa aterineto lahatsary na feo antso, Skype manao na inona na inona anjara-raharaha. Fa raha te-hiantso iraisam-pirenena maro, finday isa na telefaona an-tariby isa, dia tsy maintsy mandoa ny saran'ny famandrihana. Skype manolotra drafitra tsara tarehy hatao famandrihana ho an'ny antso ivelan'ny aterineto.
Ny mitovy ny tahan'ny miankina eo amin'ny faritra sy ny vola. Afaka mihevitra Skype ho toy ny safidy ny telefaona an-tariby fa mbola, fampiharana izany dia tsy afaka hanao ny asan'ny ny fanoloana. Iray amin'ireo antony lehibe dia tsy afaka manao antso vonjy taitra amin'ny alalan'ny Skype.
Mba hampavitrika Skype, azonao ampiasaina na Wi-Fi aterineto na ny tahirin-kevitra tambajotra finday. Manomboka mampiasa Skype, tsy maintsy manana ny Microsoft mailaka ID na Skype ID. Rehefa ho Good ny Skype kaonty, dia hahita ny lisitra fifandraisana izay efa foana ny rindrambaiko.
Ianao fotsiny maintsy tsindrio eo amin'ny mpampiasa tianao ny hiantso. Afaka mitady akory va ny tiana fifandraisana amin'ny alalan'ny fanoratana ny anarany ao amin'ny fikarohana bara. Afaka manao ny lisitry ny be mpampiasa indrindra fifandraisana amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo amin'ny favoris.
Nandritra ny lahatsary antso, Skype manome safidy maro anisan'izany ny moana ny antso, jiro fakan-tsary, -feo ihany no fomba sy hamarana ny antso. Skype koa ny hanolotra be tolotra hafatra ifandrimbonana ho amin'ny mpampiasa.
Fa ny fiainana manokana, Skype dia ahafahanao hanakana na mamafa ny fifandraisana. Ankoatra izany, izany koa mamela anao tsy niraharaha ny hafatra fangatahana na ampiasaina raha tsy mahafantatra azy.
Na ianao ny OS X mpampiasa na mpampiasa iOS; dia afaka mampiasa ny adiresy boky sy ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fampiasana Skype. Skype Afaka Mandefa antso ho isaina izay tianao. Azonao atao ny hahazo izany fanompoana izany amin'ny alalan'ny Skype mividy voninahitra. Skype tanteraka lahatsary conferencing sehatra izay mamela ireo mpampiasa ny fitaovana isan-karazany hatao tokan-tena mifandray amin'ny alalan'ny fampiasana rindrambaiko.
Quality ny Skype:
Indrisy, Skype tsy manolotra tsara kalitao ny feo sy lahatsary antso. Indraindray, na dia mampiasa aterineto haingam-pandeha, ianao dia mbola afaka miatrika ambany vahaolana sy shuttering Video antso.
Ireo olana ireo na dia sarotra kokoa raha manandrana mampiasa Skype nandritra ny faran'ny herinandro. Ny tena antony dia, Skype dia fanatitra ny tolotra rehetra noho ny fitaovana sy ny tsy manam-petra isan'ny mpampiasa, toetra ny olona miatrika ny olana. Ny zava-tsoa dia ny ekipa ny Skype dia miasa mba hamahana io olana io mba ho mpanjifa afa-po.
Face Time dia iray amin'ireo rindrambaiko malaza izay mahatonga ny mpampiasa foana sambatra sy afa-po. Ity lahatsary telephony rindrambaiko no natomboky ny Apple in 2011. Ity rindrambaiko natao teo ihany mba ho mora ho an'ny Apple mpampiasa fitaovana ao anatin'izany iPads, iPhones, iPods, ary Macs hijanona interlinked ny mankafy ny lahatsary sy ny feo fifandraisana.
Face Time dia mankafy ny chunk lehibe ny mpanjifa afa-po. Araka ny fanadihadiana, mihoatra ny 70 tapitrisa OS X mpampiasa sy ny iOS mpampiasa no maka ny fanampian'ny Face fotoana hiresahana amin'ny hafa mpampiasa.
Mifanentana amin'ny Face Time:
Afaka mihazakazaka izany ihany no rindrankajy ao amin'ny Apple fitaovana. Tsy maintsy manana Mac na iOS fitaovana miaraka amin'ny fakan-tsary mba handroso miatrika manomboka ny antso amin'ny alalan'ny lahatsary Face Time. Face fotoana voafetra mifanentana ary azo idirana ihany fitaovana ho an'ny Apple. Afaka manomboka mampiasa Face Time raha misy ny manaraka
iPad 2 na taty aoriana,
iPhone 4 na taty aoriana
4taranaka faha iPod na taty aoriana
Mac OS X 10.6.6 ary taty aoriana
Raha ny fitaovana tsy manana ny in-nanorina fakan-tsary, dia tsy maintsy mampiditra ny tranonkala ivelany fakan-tsary mba hanomboka nitarika Video antso.
Endriky ny Face Time:
voalohany, Face Time mamela ny mpanjifa mba hahazo ny tolotra amin'ny alalan'ny fampiasana tambajotra Wifi fifandraisana ihany. Fa ny fandrosoana sy ny fivoaran'ny teknolojia, izany no avela ny mpanjifa mba mihazakazaka fampiharana ity amin'ny alalan'ny fampiasana ny tambajotra finday tahirin-kevitra ihany koa.
Fifaninanana iray mahatsara ny Face Time dia, Tsy toy ny Skype tsy maintsy mandeha ny alalan 'ny dingan' ny fitantanana ny tantara. Rehefa manomboka mampiasa Face Time, dia ho azy sy mampiditra ny ilaina rehetra synchronizes angon-drakitra ny adiresy boky sy ny fifandraisana ho an'ny iOS sy ny OS X mpampiasa.
Face Time dia tena mora ampiasaina. Rehefa mandroso ny bokotra mba hametraka ny antso, Azonao jerena safidy isan-karazany ilaina ao anatin'izany ny jiro fakan-tsary, moana ny mikrô na hamarana ny antso. Apple tsy manolotra ny mpanjifa VOIP tolotra izay Skype manao.
Fampidirana Face Time:
Apple manana amoron'ny mampiditra avo roa-fampisehoana rindrambaiko sy ny fitaovana ho an'ny lahatsary telephony asa. Face Time dia natao mba hanome ny valiny amin'ny A-andian-dahatsoratra "rafitra amin'ny Chip" sy iSight fakan-tsary. Amin'ny fanomezana zava-dehibe vokatry ny lahatsary sy ny feo antso, Face Time tsy miasa akory va iva passante fifandraisana.
Apple foana niezaka mafy mba hitondra ny Premium kalitao sy ny vokatra miavaka-miompana amin'ny fampiharana ny mpanjifa. Face Time ihany koa izany natao tamin'ny filozofian'ny ny Apple, tsy afaka mahazo mahantra lahatsary fahadisoana sy ny feo latsaka mandritra ny fifandraisana. Face Time dia natao araka ny tontolo iainana eto amin'izao tontolo izao ny Apple.
Quality Feature ny Face Time:
Apple foana Nanantitrantitra ny toetra sy ny tsara indrindra ny tolotra izay ateriny. Izany no antony noho izay Face Time manana toetra tsara kokoa noho ny mpifaninana Skype. Face Time manome avo-tsara Video telephony tolotra mifototra amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Eny, ny horonan-tsary sy feo antso, Face Time manome voafaritra tsara, uninterrupted, mazava feo sy ny sary miaraka amin'ny malama mihetsiketsika mihetsika.
Ity fampiharana ny Face mahagaga ny fotoana ianao mba hahatonga ny fahatsiarovana tsara tarehy, mba hijanona mifandray sy mampita hafatra.
Ny tapaka sy tsara kalitao ihany koa ny zava-dehibe ny fifandraisana rehefa tena manana zava-dehibe mba hampitana, na te-hanome ny famelabelaranao, na te-handresy lahatra ny mpanjifa amin'ny fivarotana sy dity ny lisitra mitohy.
Face Time sy Skype, na fampiharana no mahatalanjona noho ny fitarihana peo lahatsary na antso. Raha toa ianao ka mpampiasa ny fitaovana Apple, ary te-hiaina toetra tsara indrindra dia tsy maintsy mampiasa Face Time.
mifanohitra, raha te-hatao mifandray amin'ny olona ivelan'ny tontolon'ny fitaovana Apple dia Skype no safidy tsara indrindra raikitra ho anao.